OpenExpo Virtual Zvakaitika 2021: chiitiko chinotarisirwa kwazvo chinosvika | Linux Vakapindwa muropa
OpenExpo Virtual Zvakaitika 2021: Iyo yegumi nesere yechiitiko chinotarisirwa kwazvo inosvika
LxA iri zvakare mushamarari mudiwa weimwe yezviitiko zvakakosha pane tekinoroji uye yakavhurika-sosi. Uye isu tinofara kutaurirana kuti kuri kuuya OpenExpo Virtual Zvakaitika 2021. Iyo 8th edition ichaitika kubva Chipiri chinotevera June 8 kusvika Chishanu June 11. Mazuva mana ausingakwanise kupotsa kana iwe uchida kuve unowirirana maererano netekinoroji uye hunyanzvi.
Kusiyana nemamwe edhisheni eOpenExpo Europe, maitiro egore rapfuura anoenderera uye chichava 100% online chiitiko, saka unogona kunakidzwa nayo kubva chero kwaunoda, usingafambe uye mukuchengeteka kwakakwana.
Gore rino, OpenExpo Virtual Zvakaitika 2021 ichave neakasarudzika mutsigiri, sezvazvichava kubatana kwaChema Alonso pachake, iyo CDCO yeTelefonica uye ine mbiri yekubira. Uye zvakare, pachave paine zvimwe zvitsva uye zvakare zvinokatyamadza, senge iyo inonzi «Iyo Inzwi reVateereri«, Izvo iwe zvaunozoziva chete kana iwe wafunga kuenda ().
ari nhau Izvo zvine hukama nemadingindira, mafomati uye kuiswa kwemakwikwi pakati pemakambani neOpenTrivial iyo iwe yaunogona kutora mukana Ehezve, iyo OpenExpo Virtual Chiitiko haizoshaye zvakakosha zveichi chiitiko, senge mharidzo kana kutenderera matafura.
OpenExpo Virtual Zvakaitika 2021 ichave nekubatana kwevanokurudzira IT, nyanzvi munzvimbo dzakasiyana, vatungamiriri vemafungiro, vanoita sarudzo, uye vanhu vane mukurumbira vanozove chikamu che mharidzo dzinopfuura zana iyo iwe yaunogona kuenda kunenge mukati memazuva ano.
Kana zvakadaro madingindira, kuwedzera kune zvakajairwa paBlockchain, Big Data, Cloud, Cybersecurity, AI, yakavhurika-sosi, pakati pevamwe, isu tinofanirwa zvakare kuwedzera idzo dzeEdTech, kusimudzira uye nharaunda maererano nenyika yetekinoroji, GovTech, mimhanzi uye digitization. , kudzidziswa uye IT basa, kuwanikwa, nezvimwe.
Kana iwe uine shungu nezve idzi dzese misoro, chengetera nzvimbo mune yako ajenda yeiyo June 8, 9, 10 na11, uye kunyoresa kubva kune chero eaya mana sarudzo:
Mamwe mashoko - Yepamutemo Webhusaiti yeChiitiko
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » OpenExpo Virtual Zvakaitika 2021: Iyo yegumi nesere yechiitiko chinotarisirwa kwazvo inosvika